Community Coin စျေး - အွန်လိုင်း COMM ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Community Coin (COMM)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Community Coin (COMM) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Community Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Community Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Community Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Community CoinCOMM သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.371Community CoinCOMM သို့ ယူရိုEUR€0.313Community CoinCOMM သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.282Community CoinCOMM သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.338Community CoinCOMM သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr3.33Community CoinCOMM သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.2.33Community CoinCOMM သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč8.23Community CoinCOMM သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł1.38Community CoinCOMM သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.494Community CoinCOMM သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.514Community CoinCOMM သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$8.32Community CoinCOMM သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$2.88Community CoinCOMM သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.99Community CoinCOMM သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹27.85Community CoinCOMM သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.62.65Community CoinCOMM သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.509Community CoinCOMM သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.557Community CoinCOMM သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿11.56Community CoinCOMM သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥2.58Community CoinCOMM သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥39.18Community CoinCOMM သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩440.15Community CoinCOMM သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦141.34Community CoinCOMM သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽27.26Community CoinCOMM သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴10.29
Community CoinCOMM သို့ BitcoinBTC0.00003 Community CoinCOMM သို့ EthereumETH0.000938 Community CoinCOMM သို့ LitecoinLTC0.00618 Community CoinCOMM သို့ DigitalCashDASH0.00362 Community CoinCOMM သို့ MoneroXMR0.00397 Community CoinCOMM သို့ NxtNXT26.37 Community CoinCOMM သို့ Ethereum ClassicETC0.0517 Community CoinCOMM သို့ DogecoinDOGE103.24 Community CoinCOMM သို့ ZCashZEC0.00372 Community CoinCOMM သို့ BitsharesBTS14.13 Community CoinCOMM သို့ DigiByteDGB13.56 Community CoinCOMM သို့ RippleXRP1.21 Community CoinCOMM သို့ BitcoinDarkBTCD0.0125 Community CoinCOMM သို့ PeerCoinPPC1.29 Community CoinCOMM သို့ CraigsCoinCRAIG165.13 Community CoinCOMM သို့ BitstakeXBS15.46 Community CoinCOMM သို့ PayCoinXPY6.33 Community CoinCOMM သို့ ProsperCoinPRC45.47 Community CoinCOMM သို့ YbCoinYBC0.000195 Community CoinCOMM သို့ DarkKushDANK116.2 Community CoinCOMM သို့ GiveCoinGIVE784.36 Community CoinCOMM သို့ KoboCoinKOBO81.37 Community CoinCOMM သို့ DarkTokenDT0.342 Community CoinCOMM သို့ CETUS CoinCETI1045.81